ဟိုတယ် Transylvania Adventure ရှိ Mavis, Hank (သို့) Wendy ကိုကူညီပါ။ ကောင်းစွာပြုလုပ်ထားသော Arcade ဂိမ်း
စွန့်စားခန်းဟိုတယ် Transilvania သည်အလွန်တရာ arcade တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် Android တွင်တွေ့ရသောအခြား platform များကဲ့သို့တူညီသောစာရွက်ကိုထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်အထိ Vikendi မြေပုံသစ်ကို PUBG Mobile တွင်ဒေါင်းလုပ် ချ၍ မရပါ။ တစ်ရက်အကြာတွင်၎င်းကိုသင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင်ကစားနိုင်သည်။
ငါဟာ Monster တစ်ယောက်ပါ။ မင်းကမင်းရဲ့နဂါးတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်။ ဒါကခေါင်းကိုက်ပြီးရုပ်သေးရုပ်မထားဘူး။
Android ထုတ်ကုန်များသို့ Pro Evolution Soccer အရစ်ကျအသစ်ရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ဒါဟာ update ကို၏ပုံစံအတွက်လာပါတယ်။
လူကြိုက်များသောစစ်ပွဲများ (သို့) လွှမ်းမိုးမှုရှိခြင်းဆိုသည်မှာဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အသားဖြင့်သိရန်
လူကြိုက်များသောစစ်ပွဲများသည်ပျော်စရာ "IO" မျိုးစုံဂိမ်းကစားခြင်းဖြစ်ပြီးသင်နောက်လိုက်များနောက်လိုက်များနောက်လိုက်ရန်လိုအပ်သည်။
Dragon's Watch နှင့်အတူအဆင့်မြင့်အလှည့် -based တိုက်ခိုက်ရေး RPG
Dragon's Watch ကို Android နှင့် iard ဗားရှင်း Stardew Valley လယ်ယာဂိမ်းတွင်အလုပ်လုပ်သူများအတူတူတီထွင်ခဲ့သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Supercell ဂိမ်းများ
Supercell မှတီထွင်ထားသော Android တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ Play Store တွင်ရနိုင်သည်။
Overlords of Oblivion သည်သင်၏ Android မိုဘိုင်းတွင်အခမဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်သော RPG အတွက်အဆင့်မြင့်အမြင်အာရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။
Ego Espada သည် clicker တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်ကိုကြာရှည်စွာချိတ်ဆက်ထားနိုင်စေသည်
Google Play Store တွင်ရက်သတ္တပတ်များစွာအောင်ပွဲဆင်နွှဲနေပြီးသင်၌အခမဲ့ရရှိနိုင်သောခလုတ်နှိပ်သည့် Ego Espada ဖြင့်သော့ခလုတ်များစွာသည်သင့်အားစောင့်ကြိုနေသည်။
Munchkin.io သည်လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်များက Android တွင်စတင်ခဲ့သည့်စစ်တိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားကစားသမားများနှင့်သင်၏စစ်ပွဲများကိုအမှန်တကယ်ခံစားနိုင်သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Nintendo ဂိမ်းများ
ဒီရွေးချယ်မှုကိုအကောင်းဆုံး Android Nintendo ဂိမ်းများနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
ပိုကုန်း GO သို့သင်တန်းနည်းပြတိုက်ပွဲများ
ပိုကီမွန် GO သို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာသည့်အသစ်ပြင်ဆင်ခြင်းအသစ်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ပေးသောတိုက်ပွဲများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ ယခုရရှိနိုင်
အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကျွန်ုပ်တို့တွင် Super Fowlst ဟုခေါ်သောဤဂိမ်းကြီးရှိသည်။
ဂိမ်းတွင်ကြောင်များနှင့်ပန်ဒါများထည့်သွင်းထားသောကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Minecraft update ကိုယခု Android Play Store တွင်ရရှိနိုင်သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Warner Bros ဂိမ်းများ
ဤရွေးချယ်မှုကို Android ထုတ်ကုန်များအတွက်ယခုအချိန်အထိ Warner Bros ဖြန့်ချိခဲ့သောအကောင်းဆုံးဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။ အားလုံးရရှိနိုင်ပါပြီ
စူပါဆဲလ်၏ Brawls ကြယ်ပွင့်များထွက်နေပြီ၊ နောက်ထပ်ကြီးမားသောထိခိုက်မှုတစ်ခုမှာ Clash Royale နှင့် Clash of Clans တို့လော။
Supercell သည်နောက်ဆုံး၌ Android အား၎င်း၏ 3v3 ပွဲများအတွက် multiplayer PvP ဂိမ်း Brawl Stars ဟုခေါ်သောဂိမ်းအသစ်ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Noodlecake စတူဒီယိုဂိမ်းများ
ဤရွေးချယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ Android တွင်လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး Noodlecake Studios ဂိမ်းများဖြင့်ရှာဖွေပါ။
Redneck Rush သည်အရာဝတ္ထုရူပဗေဒကိုအသုံးပြုသောအဆုံးမဲ့ပြေးသမားဖြစ်သည်
Redneck Rush သည်အဆုံးမဲ့အပြေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသင်မမျှော်လင့်ဘဲလိုက်ဖမ်းနေသည့်အလွန်လေဆင်နှာမောင်းတစ်ခုကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး EA ဂိမ်းများ
ဒီရွေးချယ်မှုကိုအကောင်းဆုံး Android EA (Electronic Arts) ဂိမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိ Android တွင်ရရှိနိုင်ပါ။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Ubisoft ဂိမ်းများ
ဒီရွေးချယ်မှုကို Ubisoft တီထွင်ထားသောအကောင်းဆုံးဂိမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ Android ဖုန်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော် install လုပ်သည့် applications များသို့မဟုတ်ဂိမ်းများ၏မူလမြင်ကွင်းတွင်ဖြတ်လမ်းမဖန်တီးရန်မည်သို့ကာကွယ်ရမည်နည်း
Play Store မှလျှောက်လွှာတစ်ခုစီတိုင်းကိုမည်သည့်အချိန်၌ install လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ငြီးငွေ့ပါက ၄ င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြတ်လမ်းတစ်ခုဖန်တီးပေးမည်ဆိုပါက၎င်းကိုမည်သို့ရှောင်ရှားရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါလိမ့်မည်။
Videogame Guardians သည်လှုပ်ရှားမှုမရှိသော RPG clicker ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ထိန်းသူများအားတိုးတက်စေရန်၊ ငှားရမ်းရန်နှင့်ကမ္ဘာကြီးကိုအောင်ရန်အတွက်လိုလိမ့်မည်။
ဖုတ်ကောင်ဆန့်ကျင်တင်းနစ်ဂိမ်းများ? ဟုတ်တယ်၊ Smashy Duo ပေါ်မှာ
Smashy Duo သည်တင်းနစ်ကစားနည်းဖြစ်ပြီးပြိုင်ဘက်များဖြစ်သောဖုတ်ကောင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သူရဲကောင်းများကိုသော့ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
Cave FRVR ရှိသင်၏သင်္ဘောဖြင့်ဂြိုလ်များ၏နက်နဲသောအရာများကိုလေ့လာပါ
Cave FRVR သည်နဂါးငွေ့တန်းကိုစူးစမ်းရန်သင်ပိုင်ဆိုင်သောမတူညီသောသင်္ဘောများကိုကျွမ်းကျင်ရန်လိုအပ်သည့်အာကာသဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Gameloft ဂိမ်းများ
Play Store မှသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သော Android ထုတ်ကုန်များအတွက် Gameloft ဖြန့်ချိပေးသောအကောင်းဆုံးဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
Rocky Climb ၏ဒေါင်လိုက်နံရံများကသူတို့ကိုသင်တက်ပြီးသင်တွေ့ရမည့်တောင်တစ်ခုစီတွင်အောင်ပွဲခံ။ မြင့်တက်လာသည်။
သင်၏ရက်စက်သောအခြေအမြစ်ကို 100 Days ဖြင့်ကာကွယ်ပါ
100 Days သည်ဖုတ်ကောင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းဖြစ်ပြီးသင်၏အခြေစိုက်စခန်း၏ခိုင်ခံ့တိုးတက်မှုနှင့်မိတ်ဆွေသစ်များကိုငှားရမ်းရန်လိုအပ်သည်။
ထူးခြားသည့် Grand Chase နှင့်အတူအာရှမဟာဗျူဟာ RPG
Grand Chase ကိုစပိန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားပြီးအဆင့်တိုင်း၌၎င်း၏ကြီးမားသောနည်းပညာဖြန့်ကျက်မှုအတွက်ထင်ရှားသည်။ သငျသညျခဏခဏ RPG ရပါလိမ့်မယ်
သာယာသော Fumble Fang ၏လင်းနို့၏ပျော့ပျောင်းသောလေယာဉ်ဖြင့်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးကိုရှောင်ပါ
Fumble Fang သည်သင်ရှေ့တွင်ရှိနေသောအဆင့်များကိုကျော်ဖြတ်ရန်အလွန်မြင့်မားစွာပျံသန်းရသည့် Arcade ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်အိုလံပစ်အားကစားကို ၁၀ နှစ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးစပွန်ဆာအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်လိမ့်မည်။
Command & Conquer: Rivals PVP သည်သင်၏ Android အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော RTS Saga ပြန်လည်ရရှိသည်
Command & Conquer: ပြိုင်ဘက် PVP သည်ကောင်းမွန်သော Freemium ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်မည်သူထံမှလာသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အားအနည်းငယ်အေးစေသည်။ သငျသညျသံသယမရှိဘဲပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ပိုကီမွန် GO ကစားသမားတိုက်ပွဲများမည်သို့အလုပ်လုပ်မည်နည်း
ပိုကီမွန် GO ကစားသမားများအကြားတိုက်ပွဲများမည်သို့မည်ပုံလုပ်ဆောင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လက်နှိပ်ဓာတ်မီးဖြင့် Ghost Pop ၏ဇတ်ကောင်များသည်ပေါ်လာမည့်သရဲများကိုဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ တစ်ဆယ် Arcade ။
တကယ်လို့သင်ဟာ Arcade ကောင်းတွေအတွက်ပရိတ်သတ်တစ် ဦး ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ Cat Gunner ဟာသင်မလွဲမရှောင်သာဖြစ်ပြီး Google Play Store မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်။
ဂူဂဲလ်သည် 2018 ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးဂိမ်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဂိမ်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ၏အဆင့်ကိုဖန်တီးထားသည်။
Burger Shop2ရှိရပ်ကွက်အတွင်းသင်၏ဘာဂါများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေပါ
Burger Shop2သည်အမျိုးမျိုးသောဟင်းလျာအမျိုးအစား ၁၀၀ အထိဖန်တီးနိုင်သည့် Arcade ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Google Play Store မှအခမဲ့ဂိမ်းတစ်ခု။
mechs အသစ်များကိုရယူပါ၊ ၎င်းတို့ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။ Mech Battle ရှိကစားသမား ၄ ယောက်အား PvP တိုက်ပွဲများသို့ပို့ဆောင်ပါ
Mech Battle ဟာသေချာပေါက်အကောင်းဆုံးကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Google Play Store တွင်တွေ့နိုင်သည်။
Faraway 4: ရှေးခေတ် Escape သည်အမြင်အာရုံကောင်းမွန်ပြီးလွတ်မြောက်သည့်အခန်းဖြစ်သည်
Faraway 4: Ancient Escape၊ ပြီးပြည့်စုံစွာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသောဘေးလွတ်မြောက်ရေးအခန်းရှိအတိတ်၏အမှန်တရားကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
Spectrum Break သည်အရာဝတ္ထု၏ရူပဗေဒကြောင့်ငါတို့ခြေရင်း၌ရွေ့လျားနေသောပလက်ဖောင်းများနှင့်အလွန်ကောင်းသောဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုရရှိသည်။
ပိုကီမွန် GO: သင်တန်းဆရာများအကြားတိုက်ပွဲများအလွန်နီးကပ်သည်
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုကီမွန် GO ရှိရပ်ရွာနေ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သည်။
Rocket Dodge ဆိုသည်မှာသင်၏အာကာသယာဉ်နှင့်တိုက်မိရန်ကြိုးစားမည့်ဒုံးပျံအမြောက်အများကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။
Shin Megami Tensei Liberation Dx2 ကိုခံစားရန်အသုံးဝင်သောအချက်များ
ရက်အနည်းငယ်အကြာက Shin Megami Tensei Liberation Dx2 ကိုအခြေခံပြီး RPG ဂိမ်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
Galaxy တွင်သီးသန့်ဂိမ်းများရှိလိမ့်မည်။ Samsung သည် Niantic တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
Samsung နှင့် Niantic တို့အကြားသဘောတူညီချက်ကိုရှာဖွေပါ။ စတူဒီယိုသည် Samsung Galaxy ဖုန်းများအတွက်သီးသန့်ဂိမ်းများကိုထုတ်လုပ်မည်။
Slide Match ဆိုသည်မှာချိတ်ဆက်ရန်ခက်ခဲလေ့ရှိပြီး၎င်းကိုမူရင်းနှင့်ကိုက်ညီသောပဟေpိတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါမျိုးကိုငါတို့ပထမဆုံးတွေ့ဖူးတာမဟုတ်ဘူး။
သင်ဟာ Martian အမျိုးအစားကိုနှစ်သက်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် Space Wingmen နဲ့သူ့ရဲ့နည်းပညာပြသမှုကိုအလင်းရောင်တစ်ခုလုံးအတွက်လက်လွတ်မခံနိုင်ပါ။
Merge Mon သည်ပဟေlesိများ၊ RPGs များကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများနှင့်သူတို့၏စစ်တပ်၏မိကျောင်းကြီးများသည်ရန်သူအားမပြတ်တမ်းတိုက်ခိုက်နေသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
Samurai Kazuya သည် RPG clicker ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်နေရာတိုင်းမှထွက်ပေါ်လာမည့်ရန်သူအားလုံးကိုအနိုင်ယူရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓားများကိုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မည်။
Crush the Castle သည်အလွန်ကောင်းသောအရာဝတ္ထုရူပဗေဒနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသောပဟေgameိဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရဲတိုက်များ၏ပျက်စီးခြင်း၌ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိလိမ့်မည်။
Rev Heads Rally ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲ၏အရူးကားများ
Rev Heads Rally သည်သင့်အတွက်ပြိုင်ဘက်ကိုအပြီးသတ်အောင်ပွဲခံရန်ဖယ်ရှားပစ်ရမည့်အလွန်ကြီးမားသည့် Arcade ပြိုင်ပွဲဂိမ်းဖြစ်သည်။
Black Friday အရောင်းသည် Google Play စတိုးသို့ဆိုက်ရောက်ပြီး Cyber ​​Monday အထိရနိုင်သည်
Black Friday သည် Play Store သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအထူးလျှော့စျေးများစွာနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများရှိသည်။
Stack Hit သည်များသောအားဖြင့်ကြီးမားသောအခက်အခဲများရှိသောအဝတ်အထည်များသို့ရောက်သောအခြားထိခိုက်သေဆုံးမှုဖြစ်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတူတူမပြောနိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သဘောမတူပါ။
PUBG Mobile သည်ပိုပိုပြီးလူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှဤဂိမ်းကြီး၏စစ်ပွဲတွင်ဂိမ်းစာရင်းဇယားကိုမည်သို့ဖုံးကွယ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
Shin Megami Tensei: Liberation Dx2: SEGA ဂိမ်းအသစ်သည် Android အတွက်ဖြစ်သည်
ယခုကျွန်ုပ်တို့ Android အတွက်တရားဝင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သော SEGA ဂိမ်းအသစ်ဖြစ်သော Shin Megami Tensei Liberation Dx2 အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အလျင်စလိုလက်စားချေမှုယခုရရှိနိုင်ဆုံး - အမြင့်မြတ်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှ Sagas ပြန်လာ၏
Ubisoft သည် Assassins's Creed Rebellion ကို Google Play Store သို့ယူဆောင်လာသည်။ သို့မှသာသင်သည်သင်၏ညီအစ်ကိုများကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးသူတို့၏ဌာနချုပ်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
Warland ၏သူရဲကောင်းများ၏ကောင်းကျိုးအတွက် Multiplayer ပထမလူတစ် ဦး သေနတ်သမား
အကယ်၍ သေနတ်သမားများသည်သင်၏အရာဖြစ်ပါက Warland ၏သူရဲကောင်းများနှင့်အတူသင်သည်အခြားကစားသမား ၄ ဦး နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့်ရှေ့ဆက်ပြီးဂိမ်းများစွာရလိမ့်မည်။
သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံများစွာကိုရှာဖွေနေပါကသင်၏ Android အတွက် Noodlecake ဂိမ်းဖြစ်သော Pies Ligeros ကပေးသည်။
Stack & Crack သည်သင်အခြားသူများကိုသယ်ဆောင်ရန်အပိုင်းအစအချို့ကိုစုစည်းရမည့်ပဟေisိတစ်ခုဖြစ်သည်
Stack & Crack တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအပိုင်းအစများကိုအခြားသူများ၏ထိပ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးဂိမ်းစားပွဲတစ်ဝိုက်တွင်ရွှေ့။ အဆင့်ကိုပြီးအောင်လုပ်ရမည်။ တစ် ဦး ကအကြီးအအမြင်အာရုံစတိုင်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားသည့် application များ၏တည်နေရာကိုအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ခြင်းသည်ဤဆောင်းပါး၌သင်ပြသောအလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
Red Siren: Space Defense, ဒါမှမဟုတ် 80s ၏ဒဏ္ofာရီခုခံကာကွယ်မှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
ဘေးဘက် scrolling ဖြင့် Red Siren သည်ပုံဆွဲရန်နှင့်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အနာဂတ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားသောရိုက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Bunnymare: Circus Escape သည် Lemmings တောင့်တသောအကောင်းဆုံးကစားနည်းဖြစ်သည်
Bunnymare သည် Lemmings မှလုံးဝမှုတ်သွင်းခံထားရသောဂိမ်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆပ်ကပ်လောကသို့ပို့ဆောင်ရန်အတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထိတွေ့မှုကိုပေးသည်။
အခမဲ့နှင့်စမ်းသုံးနိုင်တဲ့ Mincecraft version ကိုအခု Google Play Store မှာရနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒါကိုမစမ်းခင်စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Non-Stop Space Defense ဖြင့်သင်၏မိုဘိုင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နီယွန်အလင်းပေါက်ကွဲခြင်း
ဒီဂိမ်းကို Non-Stop Space Defense ဟုခေါ်သောသင့်မိုဘိုင်း၏မျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။ တစ် ဦး ကအရပ်ရှည်ရှည်ရိုက်ကူး '' သူတို့ကိုတက်။
သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှအခမဲ့ Minecraft ကိုကစားလို။ ၎င်းရေရေကမ္ဘာကဲ့သို့သောဤဂိမ်းကြီး၏ကမ္ဘာလောက၌ပျော်မွေ့လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားစာမဖတ်ပါနှင့်။
Don Zombi သည်ဖုတ်ကောင်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သည့်ဖုတ်ကောင်မှရပ်စရာမလိုဘဲဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်း၏အမြင်အာရုံဗေဒမှအာရုံစူးစိုက်။
ရာသီသစ်သည်နီးကပ်နေပြီ ဖြစ်၍ Tencent ဂိမ်းများသည် ၀.၉.၅ beta အသစ်ဖြင့်သင်ရရှိနိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။
Bang The Blocks သည်သင့်ဘ ၀ ရှိနှလုံးသားသုံးခုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားသည့်များစွာသောပိတ်ပင်တားဆီးမှုများမပေါက်ကွဲမီကသင့်ကိုချထားသည်။
သင်၏ Android ဖုန်းမှ Play Games ကို သုံး၍ လက်ကျန်ဂိမ်းများကိုအလွယ်တကူမည်သို့ရနိုင်သည်ကိုလေ့လာပါ၊ ထို့ကြောင့်ထိုဂိမ်းများရှိသည်။
Fire Balls 3D သည်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတ်ဆင်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအလှအပနှင့်စွဲလမ်းမှုကိုဥပမာပေးသည်
Fire Balls 3D သည်စွဲစွဲလမ်းစေသော gameplay နှင့်ကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံကုသမှုတို့ဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေရန်ဖြစ်သည်။ သံသယမရှိဘဲမျက်စိ - ဖမ်း။
အနိုင်ရသူများအဖြစ်မြှင့်တင်နိုင်သည့်ဂူးဂဲလ် Play အကောင်းဆုံး ၂၀၁၈ ဆုပေးပွဲတွင်ရွေးချယ်ထားသောဂိမ်း ၂၀ နှင့်အပလီကေးရှင်း ၂၀ ကိုရှာဖွေပါ။
Crazy Dino ဥယျာဉ်၌သင်ကအရူးအနားဆုံးဒိုင်နိုဆောအပန်းဖြေဥယျာဉ်ကိုစီမံရတယ်
Crazy Dino ပန်းခြံသည်သင့်အားအခင်းဖြစ်ပွားရာဥယျာဉ်တစ်ခု၏စီမံခန့်ခွဲမှုရှေ့တွင်ထားကာဒိုင်နိုဆောအရိုးများကိုအခြားဂိမ်းကစားခြင်းအဖြစ်မေ့မထားဘဲထားခဲ့သည်။
PUBG Mobile Erangel မြေပုံရှိအထင်ကရ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အချို့ကိုချာနိုဘိုင်းအဓိကစက်ရုံမှတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Survival City ရှိဖုတ်ကောင်များထံမှသင်၏အခြေစိုက်စခန်းကိုခုခံကာကွယ်ပါ
Survival City သည်၎င်း၏အခြေခံအချက်များပါဝင်သည့်အခြေခံအဆောက်အ ဦး ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ဖုတ်ကောင်တိုက်ခိုက်မှုကနေအခြေစိုက်စခန်းခုခံကာကွယ်။
Spoorky ပလက်ဖောင်းသည်အတော်လေးအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ သင်၏အဆင့်ကို ဖန်တီး၍ အခြားကစားသမားများနှင့်ကစားပါ
သင်ဟာကောင်းမွန်တဲ့ platformer တစ်ခုကိုရှာနေမယ်ဆိုရင် Spoorky ပါ။ ထို့အပြင်အခြားသူများကစားရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်အတွက်အဆင့်အယ်ဒီတာနှင့် ပို၍ များစွာရှိသည်။
Paint Hit သည်သင့်အားလက်ဖြင့်ဖြီးယူရန်နှင့်မီးမောင်းထိုးပြစရာမလိုဘဲအရည်အသွေးနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်လွယ်ကူသောပိုက်များကိုဆေးထိုးရန်သင့်အားကမ်းလှမ်းသည်။
Knights & Dungeons သည်အဆင့်များစွာရှိပြီးလုပ်စရာများစွာရှိသော la Diablo လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု RPG ဖြစ်သည်
Knights & Dungeons သည်နာရီများစွာဆုံးရှုံးခြင်း၊ ရန်သူရာပေါင်းများစွာကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တန်ဖိုးရှိသောလုယက်မှုများကိုစုဆောင်းလိုသောလှုပ်ရှားမှု RPG တစ်ခုဖြစ်သည်။
Ochontera GlowGrid2အတွက်ဗေဒသည် Tetris မှလှုံ့ဆော်ပေးသောပဟေaိတစ်ခုဖြစ်သည်
GlowGrid2သည်ပဟေgameိဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဘုတ်အဖွဲ့မှ Tetris အပိုင်းများကိုပေါင်းစပ်ပြီးဒဏ္myာရီဆန်သောဂိမ်းများနှင့်အလွန်ကွဲပြားသည်။
SEGA Heroes သည်နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီမှကစားခဲ့သည့်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ Candy Crush Saga တွင်ရည်ရွယ်ချက်အသစ်များဖြင့်ဤဂိမ်းအသစ်ကိုလာသည်။
Math and Sorcery ဟုခေါ်သော retro RPG တစ်ခုဖြစ်သည့်သင်ထပ်ပေါင်းခြင်း၊ နုတ်ခြင်းကဲ့သို့သောသင်္ချာဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုထပ်မံကျွမ်းကျင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Red နှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းများအား Orbitus ဂြိုလ်ကို Trigger Heroes ဟုခေါ်သောအေးဆေးသောဂိမ်းတွင်လွတ်မြောက်အောင်ကူညီပါ။ Google Play စတိုးမှအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဤအချိန်တွင် Zombie Age ကိုဖန်တီးသူများမှအသစ်ဖြစ်သော Battle Hunger နှင့်ဓားဖြင့်ထိုးသည်
အကယ်၍ သင်သည် Zombie Age2ကိုကစားခဲ့လျှင်သင်သည် Battle Hunger တွင်ဓားများ၊ orcs များနှင့်အခြားအရာများဖြင့်အလယ်ခေတ်တွင်ပိုမိုတွေ့ကြုံရလိမ့်မည်။
Rumble Arena ရှိအခြားကစားသမားများနှင့်လက်သီးဆန့ ်၍ ကန်နှင့်တိုက်ခိုက်ပါ
Rumble Arena သည်ကြီးကျယ်သော Nintendo Super Smash Bro ၏လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်သည်။
လွှဲ! ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၏ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုလွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်ရန်နှင့်ထိုသေတ္တာများကိုကောင်းစွာပစ်ချရန်အခက်အခဲများစွာရှိသည်။
King သည် Candy Crush Friends Saga နှင့်သောင်းနှင့်ချီသောသကြားလုံးများကိုပေါင်းစပ်။ အခြားခေါင်းစဉ်အသစ်ကိုယူဆောင်လာသည်။ အားလုံးပရိသတ်တွေသည်။
Blizzard သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်မှဆင်းသက်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ မသေနိုင်သောစာတန်သည်မကြာမီလာတော့မည်။ ယခုစာရင်းသွင်းပါ
အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အတွက်မေးခွန်း ၂ ခုနှင့်ဂရပ်ဖစ်စတိုင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏မိုးကောင်းကင်များကိုသင်၏လေယာဉ်နှင့်အတူ Air Combat Pilot: WW2 Pacific ကိုထိန်းချုပ်ပါ
Air Combat Pilot: WW2 Pacific သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုအတွက်သင်၏ Android ကိုသင်၏လေယာဉ်ပေါ်တွင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဂူးဂဲလ်ရဲ့အကောင်းဆုံး ၂၀၁၈ ဆုပေးပွဲ - ဒါကြောင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းအတွက်မဲပေးနိုင်သည်
သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းအတွက် Google Play Best Of 2018 Awards တွင်မည်သို့မဲပေးနိုင်သည်ကိုရှာဖွေပါ။ နိုဝင်ဘာ ၁၂ မှမဲ
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Golf Battle တွင် Real-time multiplayer ပွဲများကိုယှဉ်ပြိုင်ပါ
ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းသည် multiplayer game ဖြစ်ပြီးကစားပွဲတွင်အခြားသူများကိုသင်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်များစွာသော Modes နှင့်အကြောင်းအရာများစွာပါရှိသည်။
လျင်မြန်သောနှုန်းဖြင့် Flippy Skate သည် Ketchapp Games မှအသစ်ဖြစ်ပြီး Android တွင်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပစ္စည်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်စတူဒီယိုဖြစ်သည်။
Ava Airbone hang glider ဖြင့်ကောင်းကင်သို့တက်ပါ
သင်၏လေယာဉ်ပျံပေါ်တွင်သင်၏လေယာဉ်ပျံပေါ်တက်လာပြီးအမြင့်ဆုံးအကွာအဝေးကိုရောက်စေရန်အတွက်သင်ကောင်းကင်သို့တက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် Ava Airbone ရှိ Ava ကိုကူညီလိမ့်မည်။
ယခုဒဏ္myာရီဆန်သော MMORPG RuneScape ကို Android တွင်ရနိုင်သည်
အလွန်ကြီးစွာသော MMORPG ပြာများမှသင်၏ Android ကိရိယာ RuneScape သို့တိုက်ရိုက်ပြန်သွားသည်။ သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အခမဲ့ကစားပါ။
၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ဘရောက်ဇာရှိသည့်ဟယ်လိုဝိန်းအတွက်ဂူဂဲလ်၏မျိုးစုံဂိမ်းကိုဖွင့်ရန်ပစ္စည်းအားလုံးအတွက်ရနိုင်သည်။
Mummy King နှင့်သူ၏ Legion of the monster တို့ကို Turn Turn Undead2ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ
Nitrome မှပျော်စရာကောင်းသောပျော်စရာ Turn Undead2တွင် Mummy King ၏အမှောင်ထုကိုဖျက်စီးရန်ထောင်နှင့်ချီသောလောင်းကြေးများကိုပြင်ဆင်ပါ။
ဒီဟယ်လို 2018 ခံစားရန်အကောင်းဆုံးဖုတ်ကောင်ဂိမ်း
သင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ညတစ်ညကိုကျင်းပရန်ဤဟယ်လိုဝင်း 2018 ကိုပျော်မွေ့နိုင်မည့်အကောင်းဆုံးဖုတ်ကောင်ဂိမ်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Swipe Magic တွင်အမူအယာများဖြင့်ပထဝီပုံစံကိုပုံဆွဲရန်အဆင်သင့်ပြင်ပါ။ အစကတည်းကတစ် ဦး ကအလွန်စိတ်ဖိစီးမှုဂိမ်း။
Fling Fighters သည်ကစားသမားများကစားခြင်းနှင့်အခြားကစားသမားများနှင့်အတုထောက်လှမ်းခြင်းများကိုဆန့်ကျင်သည့်ကစားသမားများစွာအတွက်ကစားပေးသည်။
SEGA သည်တစ်သက်တာ၏ဂန္ထဝင်ဂိမ်းများ၏ဆိုးရွားသောဆိပ်ကမ်းများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Shining Force နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟာမအံ့သြခဲ့ပါ၊
ကဏန်း King တွင်သင်၏ကြီးမားသောခြေသည်းများဖြင့်ကမ်းခြေကိုပိုင်ဆိုင်ပါ
ကဏန်းများနှင့်ကစားသမားများစွာတို့၏ရန်ပွဲများသည်အရည်အသွေးကောင်းသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် King of Crabs ဖြစ်သည်။ .io မှာဒီဂိမ်းကို 3D အများကြီးနဲ့လာပါတယ်။
Samsung က၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကြေငြာလိုက်သည်မှာ Fortnite pack အသစ်တစ်ခုသည် Samsung Galaxy ထုတ်ကုန်များအတွက်အထူးသီးသန့်ဖြစ်သည်။
လမ်မြို့ကိုမည်သို့ကစားရမည်နည်း။ သံသယ ၀ င်ခြင်း၊ လူသတ်ခြင်းနှင့်မုသာစကား
Town of Salem ကစားနည်းကိုသင်သိလိုပါကအခြားအဆင့်မြင့်ဆောင်းပါးများ၏ပထမဆုံးအပိုင်းဖြစ်သောဤလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။
Night mode၊ PUBG Mobile's Halloween ညအတွက်ဘာသာစကားတူညီသောသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအရေခွံများပြောတတ်သူများနှင့်ကစားနိုင်ခြင်း။
4Pillars တွင်အလွန်ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီး gameplay ၏ကြမ်းတမ်းသောအစွန်းများကိုတိုးတက်အောင်အနည်းငယ်မျှသာပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ထိတွေ့နိုင်သောစွမ်းရည်ရှိသောဂိမ်းတစ်ခုရှိရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်စားတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက, PAKO Forever သည်သင်၏မိုဘိုင်းသို့ယူဆောင်လာနိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စိတ်သောကရောက်နေပုံကိုနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ကြောက်လန့်စရာကောင်းသောဟယ်လိုဝင်း 2018 ဂိမ်းများ။
အဆုံးစွန်အထိနှင့် Cosmobot arcade နှင့်အတူ
အကယ်၍ သင် arcades များနှင့် space themes များကိုနှစ်သက်ပါက Cosmobot သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစပိန်ဘာသာစကားဖြင့်အခမဲ့ကစားနိုင်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုနှင့်ကံကောင်းပါစေ။
Golfmasters သည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသောခံစားမှုဖြင့်ပျော်စရာဂေါက်သီးကစားနည်းဖြစ်သည်။ သငျသညျအကောင်းဆုံး pair တစုံကိုဖြစ်စေခြင်းငှါစာဗနားတိရိစ္ဆာန်များအများအပြားတွေ့လိမ့်မည်။
တူးဖော်ပါ: တူးဖော်သည့်ဂိမ်းသည်အနည်းငယ်မျှသောဂိမ်းနှင့်ပျော်စရာကောင်းသောဂိမ်းဖြစ်သည်။ သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်တူးဖော်သူဖြစ်ရမယ်။
မစ္စတာ Juggler ကသင်သည်အမျိုးမျိုးသောဘောလုံးများကိုသယ်ဆောင်လာသူဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်
Mr. Juggler သည်ပေါ့ဆသောကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်ဆပ်ကပ်တစ်ခုအတွက်ရုန်းထွက်နိုင်သကဲ့သို့သင်၏ကိုယ်ကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကိုသင်သိရမည်ဖြစ်သည်။ A ကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအခမဲ့ဂိမ်း။
Town of Salem ကဂိမ်းဆယ်ခုပါ။ ဒီဂိမ်းဟာလူကြမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဘယ်သူလဲဆိုတာကိုရှာဖွေဖို့မြို့ရဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွေမှာအပြည့်အ ၀ ပါဝင်ရမယ်။
Piffle နှင့်သူမ၏ကလေးများသည် Crossy Road ကိုဖန်တီးသူများထံမှလာသည်
ဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ Piffle မှာအဆင့်များစွာဖြတ်သန်းနိုင်အောင်ချစ်စရာကြောင်တွေအတွက်ကြက်သားကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ခြုံငုံတစ် ဦး ကအလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်း။
ယခု Google Play ကလာမည့်ဖြန့်ချိမှုများနှင့်ငွေပေးချေသောဂိမ်းများကိုစမ်းသပ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်
Reigns - Game of Thrones သည် Daennerys de la Tormenta၊ Jon Snow နှင့်အခြားသူများအားရုပ်လုံးဖေါ်ခြင်းအားဖြင့်မင်းနိုင်ငံခုနစ်နိုင်ငံ၏အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
PUBG Mobile တွင်ဟယ်လိုဝင်းအတွက်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပါ။ အပြောင်းအလဲ ၁၀၀ နှင့်စပိန်ဘာသာစကားဖြင့်သတင်းအပြည့်အစုံ ၁၀၀ ပြည့်ပြီ။
PUBG Mobile သည်တရုတ်ပြည်၏ကြီးမားသောနောက်လိုက်များကိုဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်တပ်ဆင်မှုသန်း ၁၀၀ ကိုဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့သည်။
၀ ယ်ယူထားသောအပလီကေးရှင်းသည်သင်မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ဂိမ်းများကို ၀ ယ်ယူသည်ကိုအသိပေးသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သုံးစွဲထားသောငွေအားလုံးကိုပင်ပြောပြသည့်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးစုံထောက်ကစားနည်းလေးခု Play Store တွင်ရနိုင်သောစုံထောက်ဂိမ်းအမျိုးအစားများကိုရှာဖွေပါ။
အလွန်ဇင်ဂိမ်းတွင်ရှိသည့် Bands band: Jeff Van Dyck မှ Skyward Journey နှင့်အတူ OST
Jeff van Dyck သည် Skyward Journey အတွက်သီချင်းနောက်တစ်ခုကိုသင်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်သည်။
နည်းဗျူဟာဓားသည်“ Kill Bill” ကိုအလွန်ကောင်းသော Glory Ages Samurais တွင်တိုက်ခိုက်သည်
Android အတွက်အကောင်းဆုံးနှစ်များထဲမှတစ်ခုမှာ Glory Ages Samurais ဖြစ်သည်။ နည်းပညာပိုင်းအရဆောင်ရွက်သောအလုပ်သည်ထူးခြားသည်။
FIFA 19 beta ကို Android အတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ
FIFA 19 ကို Android အတွက် beta ပုံစံဖြင့်ရနိုင်သည်။ သင်၏ဖုန်းသို့ယခုသင် download လုပ်နိုင်သည့်ကြာမြင့်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောဘောလုံးဂိမ်း၏ beta ကိုယခုရှာဖွေပါ။
အဆိုပါ Zombie Rollerz pinball RPG စွန့်စားမှုသို့ငုပ်
Zombie Rollerz သည်အခမဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်ဘုတ်မှထိုဖုတ်ကောင်များအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်အရာဝတ္ထုရူပဗေဒကိုအသုံးပြုရမည်။
Badland Brawl သည် Clash Royale ဖြစ်သည့်အရာအားလုံးကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လှည့်ကွက်ပေးသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်၎င်း၏အရာဝတ္ထု၏ရူပဗေဒအဘို့အထင်ရှားသည်။
Molli Pop ကိုမင်းသန္တာန်မှအလုံးအရင်းနှင့်ယှဉ်။ Candies 'n Curses ကိုကူညီပါ
Candies n 'Curses သည်နည်းပညာအရဂရုစိုက်ရသော retro platformer တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်မိုဘိုင်းမျက်နှာပြင်ကို pixel art နှင့် ghosts များဖြင့်လွှမ်းမိုးနိုင်လိမ့်မည်။
Prince of Persia: Escape သည် Ketchapp Games လက်ထဲမှဒဏ္ofာရီတစ်ခုပြန်လာသည်
ဒီ Escape နဲ့ပထမဆုံးပါးရှားမင်းသားကိုဂုဏ်ပြုဖို့အစကတည်းကဖန်တီးခဲ့တာပါ။ ရှာတွေ့သည်။
Phantomgate: The Last Valkyrie သည် platformer, RPG နှင့် turn-based တိုက်ခိုက်မှုပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်
သင်သည်အကြောင်းအရာနှင့်ဂိမ်းပုံစံအမျိုးမျိုးကိုလိုချင်သည်ဆိုလျှင် Phantomgate: The Last Valkyrie သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ချဉ်းကပ်မှုအတွက်မူရင်း။
Android အတွက်အကောင်းဆုံးဖုတ်ကောင်ဂိမ်းလေးမျိုး။ Play Store တွင်ရရှိနိုင်သောဤဖုတ်ကောင်ဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
လင်ကွန်းနှင့်သူ၏သူငယ်ချင်းများအတွက်သင်၏သစ်ပင်အိမ်ကို Nickelodeon's Crazy House တွင်တည်ဆောက်ပါ
လင်ကွန်း၊ သူ့သူငယ်ချင်းများနှင့်အစ်မများ၏အဖြစ်အပျက်များအကြောင်းလေ့လာပါ။ သငျသညျမစ်ရှင်အများအပြားတည်ဆောက်ဖြည့်စွက်, အရာဝတ္ထုကိုဝယ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ပုံပြင်များကိုသင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Super Cat Tales သည် retro platformer တစ်ခုဖြစ်သည်
ဟယ်လိုဝိန်းပွဲအတွက် Android ဂိမ်းများနှင့် application များ
ဟယ်လိုဝိန်းပွဲကျင်းပရန်အတွက် Android ဂိမ်းနှင့် application ၅ ခု။ ဒီ Android ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းများနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုရရှိနိုင်ပါပြီ။
သင်၏ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်သင့်မြို့ကိုအခြားသူများမလုပ်မီ Run An Empire ဖြင့်အောင်နိုင်ပါ
Run An Empire ကိုအသုံးပြုပြီးသင်ဟာခြေလျင်လျှောက်လှမ်းလျှင်သို့မဟုတ်အပြေးသွားလျှင်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုအောင်နိုင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပါမယ်။ ပိုကီမွန် GO ကိုလိုက်နာခြင်းအတွက်စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းတစ်ခု။
ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုစွဲလမ်းပြီးနောက်တရုတ်နိုင်ငံရှိ Honor of Kings တွင်မျက်နှာကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့် Tencent သည်
တရုတ်နိုင်ငံသား Tencet သည်နိုင်ငံ၏ခံစားမှုများကိုခံစားနေရသောဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စွဲလမ်းပြီးနောက်တရုတ်၏ Honor of Kings တွင်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရမည်။
သင်၏ Android အတွက် Pocket Invader ကိုအခမဲ့ retro shoot လုပ်ပါ
ကောင်းသော retro retro martian သေနတ်သမားများအတွက်လွမ်းဆွတ်သူများအတွက် Pocket Invader ကိုရောက်ရှိလာသည်။ Google Play စတိုးတွင်အခမဲ့ရရှိနိုင်သည့်ဂိမ်းတစ်ခု။
PAC-MAN - Ralph ဟာ Maze ကိုချိုးဖောက်ပြီးဗီဒီယိုဂိမ်းအိုင်ကွန်၏ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော version ဖြစ်သည်
PAC-MAN - Ralph ကဝင်္ကပါတွေကိုချိုးဖောက်လိုက်တာကလူပျိုတွေသရဲတွေသတ်ဖြတ်ပြီးသူတို့ဆီကနေလွတ်မြောက်လာတာနဲ့အမျှ Ralph နဲ့ Felix ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်။
TheAwards - ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စပိန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်ဆုများ၊ မိုဘိုင်းဂိမ်းများနှင့် application များအတွက်ဤဆုအခမ်းအနားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Pixel Escape တွင်လိုင်းဆွဲခြင်းဖြင့်သင်၏မိတ်ဆွေများကိုလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပါ
Pixel Escape သည်ရိုးရှင်းသောပေါ့ပေါ့တန်တန်ကစားခြင်းဖြစ်ပြီးသင်၏စွန့်စားခန်းသူငယ်ချင်းများဖြတ်သန်းသွားမည့်စင်မြင့်များကိုသင်ဆွဲရန်ရှိသည်။
GarbageDay တွင်သာမန်အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးကိုရိုးရှင်းစွာကစားပါ၊ သို့သော် silhouettes ဆွဲသည့်အခါအလွန်ထင်ရှားသောအမြင်အာရုံဖြင့်ဖြစ်သည်။
Hooky Crook ဟာတော်တော်လေးကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားတဲ့ Arcade ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ကြောင်တွေကိုခိုးယူလိုတဲ့ဆန္ဒအတွက်ထင်ရှားပေါ်လွင်စေပါတယ်။
Animus Harbinger၊ သင်၏ဓားသည်ဆန့်ကျင်သူရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရာတွင်ဖြစ်သည်
နဂါးမာစတာတစ် ဦး ဖြစ်ရန်၊ အခြားသူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်နဂါးစီးတီးရှိခရူးဆိတ်စစ်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ
နဂါးစီးတီးသည်သင်၏နဂါးကိုမြှင့်တင်ရန်၊ အခြားသူများကိုလေ့ကျင့်ရန်၊ သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ရန်နှင့်အခြားသူများနှင့်ရင်ဆိုင်ရရန်အတွက်ပျော်စရာကောင်းသောတိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းကစားနည်းဖြစ်သည်။
Best Rally ပြိုင်ပွဲသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်များကိုကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်
Best Rally သည်ရိုးရှင်းသောပြိုင်ကားဂိမ်းကိုတင်ပြရန်ကတ်ပြားများကိုကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်သော်လည်း၊ အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည့်အမြင်စတိုင်သို့မဟုတ်ယင်း၏တိုက်နယ်များဖြစ်သည်။
Maze: Shadow of Light၊ ထူးခြားထင်ရှားသောဂရပ်ဖစ်များပါရှိသောအရည်အသွေးမြင့်လုပ်ဆောင်မှု RPG
Maze: Shadow of Light သည်မြင့်မားသောလုပ်ဆောင်ချက် RPG ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့သည်နည်းပညာဆိုင်ရာအဆင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အရာရာတိုင်းတွင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ဒီတနင်္ဂနွေကိုခံစားနိုင်ဖို့ Android ဂိမ်း ၅ ခု
ဒီတနင်္ဂနွေကိုသုံးရန် Android ဂိမ်း ၅ ခု ဒီစက်တင်ဘာလစတိုးဆိုင်ကိုဝင်တိုက်သောဤဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Android အတွက်ကောင်းမွန်သောပဟေgamesိဂိမ်း ၄ ခု။ သင်၏ Android ဖုန်းသို့သင်ကူးယူနိုင်သည့်ပဟေgamesိဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
Meowoof သည်လှုပ်ရှားမှုခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီးသင့်ကိုကြိုးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ကြောင်နှင့်ခွေးများ၏ရှေ့မှောက်၌နေရာချမည်။ နာရီပေါင်းများစွာကစားခြင်းနှင့်အတူစွန့်စားမှုတစ်ခု။
[APK] ယခု Dragalia Lost - အကြောင်းအရာ 2,75GB ကျော်ပါဝင်သည့် Nintendo ၏ RPG အသစ်စွန့်စားမှုကိုယခု download လုပ်ပါ
Nintendo သည်အသားများအားလုံးကို RPG လုပ်ဆောင်မှုဂိမ်းတစ်ခုလုံးကိုပျော်မွေ့ရန် Dragalia Lost နှင့် ၂.၇၅GB ကျော်ဒေတာများဖြင့်ကင်ပေါ်တွင်ထည့်ထားသည်။
Layton - ယခုအခါ Play Store ၌လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောရွာ
ပါမောက္ခ Layton Saga ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမူလခေါင်းစဉ်မှာ Play Store တွင်ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်။
Bubble Pop သည်ရိုးရှင်းသည့်ပျင်းစရာမကောင်းသောဂိမ်းဖြစ်သည်
Bubble Pop, ပူဖောင်းများကိုအပြည့်အ ၀ မြန်ဆန်စေခြင်းဖြင့်သင်၏ပျင်းစရာကောင်းသည့်အချိန်များနှင့်စောင့်ဆိုင်းရသောအချိန်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေမည့်ဂိမ်းကို download လုပ်ပါ။
Capcom သည် Monster Hunter Stories များကို Android တွင်အဆင့်မြင့်ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
အကယ်၍ သင်သည် Monster Hunter Stories ၏ 3DS ဗားရှင်းကိုကစားခဲ့ပါက၎င်းကို Android တွင်စတင်သောအခါသင်၏စမတ်ဖုန်းမှပြုလုပ်နိုင်သည်။
Marginalia သူရဲကောင်းသည်အလယ်ခေတ်မှအနုပညာရှင်များ၏အမြင်အာရုံစတိုင်နှင့်အထူးအထူး RPG ဖြစ်သည်
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းများကိုကြိုက်လျှင်, Marginalia သူရဲကောင်းသူတို့ထဲကတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ hits များထိရန်ဖန်သားပြင်ကိုအသာပုတ်ရန်လိုသည့် RPG တစ်ခု။
[APK] Ghostbusters World ကိုသင်၏ Android ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သင်၏မြို့ပတ်လည်ရှိသရဲများကိုရှာဖွေရန်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
Augmented Reality သည် Ghostbusters World အသစ်၏ဒဏ္myာရီထဲမှပြန်လည်ဝင်ရောက်သည်။
Rambo ကိုတုပပြီး Rip 'EmaNew တစ်ခု၊ လူတိုင်းကိုသတ်ဖြတ်ရန်အတွက်တောသားရဲаркада
Rambo ကိုတုပပြီးရန်သူအမြောက်အများကိုခွင့်မလွှတ်ဘဲဖျက်စီးသည့် retro-style arcade တစ်ခုတွင်လွမ်းဆွတ်မှုကိုခံစားရနိုင်သည်။
အိုမီဂါစစ်ပွဲများ - Galaxy ၏ချန်ပီယံလိဂ်သည် Clash Royale အပြီးတွင်သော်လည်း Augmented Reality နှင့်အတူလိုက်သည်
အကယ်၍ သင်သည် Augmented Reality သို့ရောက်နေလျှင်၊ Omega Wars: the Galaxy ၏ Champions, Clash Royale စတိုင်လ်ရှိ PvP ဂိမ်းကိုသင်မလွတ်နိုင်ပါ။
Pro Evolution Soccer 2019 ကို Android သို့ဒီဇင်ဘာလတွင်လာမည်
Pro Evolution Soccer 2019 ကိုဒီဇင်ဘာလတွင် Android ဖြင့်ဖြန့်ချိမည်။ ဒီနှစ် Konami ရဲ့ဂိမ်းအသစ်စတင်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
SEGA Forever ခေါင်းစဉ်သစ်သည် Rage2Classic ၏ Play Store တွင် Play Store သို့ဝင်သည်
ယခုအခါ Play Store တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဂန္တ ၀ င် SEGA Forever ဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုလမ်း၏ဒေါသ2လမ်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Flipflop Solitaire (သို့) တစ်သက်တာ Solitaire ကိုလှည့်စားပေးခြင်း
Flipflop Solitaire ဟာဒီဒဏ္legာရီကိုဂန္တ ၀ င်ဖြစ်စေချင်တဲ့ solitaire အခြေပြုကဒ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
Android နှင့် iOS အတွက်အကောင်းဆုံးမြှားပစ်ဂိမ်း
သင်၏ကိုယ်ပိုင် Scalextric ကားကို Android အတွက် XcaleHTR + Slot Car Simulation တွင်မောင်းနှင်ပါ
XcaleHTR + Slot Car Simulation ဆိုသည်မှာ Scalextric ကိုသင်၏မိုဘိုင်းဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အရာရာအားလုံးရှိစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Infinite Knights သည်အလှည့် -based တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်ကောင်းမွန်သောအချိန်များအတွက် RPG တစ်ခုဖြစ်သည်
Inifinite Knights သည် RPG ၏အသွင်အပြင်ကိုလူသိများထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရသော်လည်းအလှည့်ကျတိုက်ခိုက်သည့် RPG တစ်ခုဖြစ်သည်။
Google Play Point များဖြင့်အခမဲ့၊ မိုက်ခရိုငွေပေးချေခြင်း၊ အက်ပ်များနှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများအပြင်စာအုပ်များသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်များကဲ့သို့သောအခြားအကြောင်းအရာများကိုလည်းရနိုင်သည်။
ပျော်ရွှင်စရာ Space Loops ရှိဂြိုလ်သားများထံမှသီးနှံများကိုခိုးယူသည်
Space Loops သည်ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်စတိုင်လ်ပါ ၀ င်သည့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကစားကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်မှာမကောင်းသော alien ည့်သည်များထံမှသီးနှံများကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။
Pillar သည်ပဟေlesိများကိုဖြေရှင်းရန်အဓိကရည်ရွယ်သည့် 3D စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်
The Pillar သည် 3D game ဖြစ်ပြီးသင့်ကိုကောင်းမွန်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်အိပ်မက်ကမ္ဘာတွင်ပဟေlesိအမျိုးမျိုးဖြင့်သင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဒါဟာ beta ကိုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Vampire's Fall: Origins သည်အလွန်ကောင်းသောအခမဲ့ RPG ဖြစ်ပြီးဂန္ထဝင်အနံ့ပါသော
Vampires Fall: Origins သည်စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာများမှတဆင့်ပို့ဆောင်ပေးသောအရည်အသွေးမြင့် RPG တစ်ခုကိုအဆိုပြုထားသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အသံနှင့်ဖန်တီးထားသောလေထုကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်။
အစစ်အမှန်ခရီးစဉ်များအတွက် - ယခုသင်သည် Star Trek Trexels II နှင့်အတူနဂါးငွေ့တန်းကိုသွားနိုင်သည်
Star Trek Trexels II တွင်သင်၏အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့်စီးရီး၏ဒဏ္myာရီပုံပြင်များကိုရှာဖွေရန်သင်၏သင်္ဘောကိုတည်ဆောက်ရမည်။
H3H3: Ball Rider ဖြင့်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်ရယ်စရာအကောင်းဆုံးရူးသွပ်မှုဖြစ်သည်
H3H3: Ball Rider သည်အလွန်ကြီးမားသည့် Arcade တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကြီးမားသောဇာတ်ကောင်များထုတ်လွှင့်ရန်သင်ချွေးပေါက်များစုဆောင်းရမည်။
[APK] PUBG Mobile အသစ် update ကို 'Sanhok' မြေပုံအသစ်၊ မီးတောက်သေနတ်နှင့်အခြားအရာများဖြင့်ယခု download လုပ်ပါ
မော်တော်ယာဉ်အသစ်နှစ်စီး၊ မြေပုံအသစ်၊ ရိုင်ဖယ်အသစ်၊ သေတ္တာများကိုဆင့်ခေါ်ရန်သေနတ်ကိုင်ပုံးနှင့် PUBG Mobile မှသင့်အားများစွာစောင့်ကြိုလျက်ရှိသည်။
Wall Kickers သည်သင်၏ Android mobile အတွက်ကြီးမားသောတကယ့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
တကယ့်ပလက်ဖောင်းက Wall Kickers ပါ။ ဇာတ်ကောင်များစွာသော့ဖွင့်ထားခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသောဂိမ်းတစ်ခုစီသည်မိမိတို့၏စွမ်းရည်များဖြင့်တစ်ခုစီရှိသည်။
Armajet သည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့် Cross-platform multiplayer shooter နှင့် console graphics နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါ ၀ င်သည်
Armajet သည် Multipleayer Shooter တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိတ်ထားသော beta အဆင့်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာသီလများစွာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
Alphabear2ကို Android တွင်ရနိုင်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းများဖြင့်သင်၏ဝေါဟာရကိုတိုးတက်စေပါ
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ရန်လမ်းပေါ်တွင်ရှိပါက၊ Alphabear2သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ဝေါဟာရကိုတိုးတက်စေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။